LEGO VIDIYO ဘာတွေမှားနေတာလဲ
24 / 07 / 2021 24 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 521 Views စာ0မှတ်ချက် ၄၃၁၀၈ Bandmates, ၄၃၁၀၈ Bandmates, 43113 K-Pawp ဖျော်ဖြေပွဲ, 43115 အဆိုပါ Boombox, တပည့်, အချစ်ရယ်, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Hidden Side, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Hidden Side, Lego Vidiyo, LEGO.com, အဆိုပါ LEGO Group, Universal Music Group မှ, ဗီဒီယို
အဆိုပါ Lego Group သည် pause ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ Lego VIDIYO ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိ - ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ဆုံးပေါ်ကြိုးပမ်းမှုရဲ့နောက်ဆုံးကြိုးပမ်းမှုမှာဘာမှားသွားသလဲ။
VIDIYO ပထမဆုံးမဟုတ်ဘူး Lego AR နည်းပညာကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်ကြိုးပမ်းနေသော်လည်း၎င်းသည်တရားဝင်ရပ်ဆိုင်းထားရန်ပထမဆုံးပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ The Lego Group သည်ခေါင်းစဉ်ကိုဘေးဖယ်ထားရန်သို့မဟုတ်အနားယူရန်အစီအစဉ်များကိုရှားပါးစွာထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် - သူတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်နည်းနည်းလေးမှေးမှိန်သွားခြင်းနှင့်အတူပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်သော်လည်း မနေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန် ပြီးနောက်ကောလာဟလပေါ်ထွက်လာခဲ့သည် VIDIYO's အံ့ဆဲဆဲဖျက်သိမ်းမှု။
အဆိုပါကုမ္ပဏီယခုကြောင်းရှင်းလင်းထားသည် VIDIYOUniversal Music Group နှင့် ပူးပေါင်း၍ မွေးဖွားလာခြင်းသည်မကောင်းမွန်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ယာယီစစ်အုပ်စုသာဖြစ်သည်။
"ဒီအစီအစဉ်ကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့တုန့်ပြန်မှုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် BeatBits၊ ဂီတနဲ့အသေးစားဓာတ်ပုံတွေကအက်ပ်ကိုဖြတ်ပြီးကစားနည်းကိုအတွေ့အကြုံရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေဆီကနေတုံ့ပြန်မှုတွေရခဲ့တယ်" Lego အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ “ ဒါကြောင့်ငါတို့ကဒီဘုတ်ကိုယူပြီး Universal Music Group နဲ့အတူအသစ်တစ်ခုကိုစမ်းသပ်သွားမှာပါ ideas ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ၂၀၂၃ နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ပြဇာတ်အတွေ့အကြုံသစ်များကိုထုတ်လွှင့်ပါ။
သူများသည်မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ Lego VIDIYOပွဲတစ်ပွဲ startနေ့ကမှ ed ။ BeatBoxes ၏ပထမဆုံးလှိုင်းသည်အသေးစားပုံသဏ္offeredာန်၊ ပုံနှိပ်ထားသော ၂ × ၂ ပြားနှင့်အနည်းငယ်သောပုံသဏ္elementsာန်များကိုမျက်စိဖြင့်လောင်းသောပေါင် ၁၇.၉၉ / ဒေါ်လာ ၁၉.၉၉ / ယူရို ၁၉.၉၉ ဖြင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ , တတိယစarty လက်လီအရောင်းဆိုင်များ ချက်ချင်းသူတို့ကိုချမှတ်သား 33% ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
စတင်နေရာချသည့်အမှတ်အသားများသည်အများအားဖြင့်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုမကြားရပါ Lego စိုးရိမ်ပူပန်သည်, ဒါကြောင့်လှုပ်ရှားမှုနေရာတိုင်းမှာကြီးပြင်းမျက်ခုံး (နှင့်လည်း undercut) LEGO.comဈေးနှုန်းအပြည့်ဖြင့်ရောင်းနေရခြင်းက၎င်းတို့ကိုပိုမိုဆိုးရွားသည့်တန်ဖိုးရှိစေခြင်းဖြစ်သည်။ ပူးတွဲပါ ၄၃၁၀၈ Bandmates ပိုကောင်းသောစျေးနှုန်းမကျခဲ့ပါကeနှင့်အတူမျက်မမြင်သေတ္တာအသစ်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်xtra စံအပေါ် markup စုဆောင်းထားသောအသေးစား စျေးနှုန်း။
ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောအစောပိုင်းပြissueနာမဟုတ်ခဲ့ Lego VIDIYO, သို့သော်: ပွဲတစ်ပွဲတစ်ခုလုံးကိုပတ်ပတ်လည်တည်ဆောက်သောအရာကိုပွဲတစ်ပွဲသော၎င်း၏ပူးတွဲ app, လည်း ပြင်းထန်သောမီးအောက်မှာလာ၏။ ဂူဂဲလ်ပလေးနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများ၌ဖြန့်ချိသည့်နေ့ရက်များအတွင်းကြယ်တစ်ပွင့်နှင့်ကြယ်နှစ်ပွင့်သုံးသပ်ချက်များက၎င်းအက်ပလီကေးရှင်းကို“ နှေးကွေးပြီးရှုပ်ထွေးသော interface” နှင့်“ မကြာခဏ crash များ” အတွက်ဝေဖန်ခဲ့သည်။
အသုံးပြုသူများသည်အလွန်လျင်မြန်စွာသောအချက်ကိုပေါ်တက်ခူး VIDIYOအက်ပလီကေးရှင်းသည်တံခါးပိတ်ဂေဟစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်တိုတိုဂီတဗီဒီယိုများထုတ်လုပ်နိုင်သော်လည်း၎င်းတို့နှင့်မျှဝေလို့မရပါ friends သို့မဟုတ်အက်ပလီကေးရှင်း၏အကြီးအကျယ်ဖြည့်တင်းထားသောအစာထက်ကျော်လွန်သောမိသားစု။ ကလေးဘေးကင်းရေးအတွက်ကောင်းမွန်သော်လည်းသင်၏ဒါရိုက်တာစွမ်းရည်ကိုပြသခြင်းအတွက်အလွန်နည်းသည် VIDIYO).
ဒီနွေရာသီမှာယူကေနှင့်ဥရောပသို့ရောက်ရှိလာတဲ့ဒုတိယလှိုင်းများ (နှင့်လာမည့်လတွင်ယူအက်စ်တွင်ဖြန့်ချိမည်) သည်အနည်းဆုံးတကယ့်တည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံ၏လမ်းကိုပေးသည်၊ သို့သော်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျခြင်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်ကန့်သတ်ချက်ရှိသည် များအတွက် (ယာယီ) သေဒဏ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် VIDIYO.
ဆိုလိုသည်မှာအဓိကအကြောင်းအရာသည်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည် Hidden Side၎င်းတွင်တိုးချဲ့ထားသောအဖြစ်မှန်ချိတ်လည်းပါ ၀ င်သည် - သို့သော်သင်္ဘောသို့မပို့ဆောင်မီလှိုင်းလုံးသုံးလုံးကိုစီမံနိုင်ခဲ့သည် Lego အငြိမ်းစားအိမ်။ အဓိကကွာခြားချက်ကဘယ်မှာလဲ VIDIYO ၎င်း၏ BeatBoxes နှင့် Bandmates (သူတို့၏ ၀ င်ဆံ့မှုအလွန်သေးငယ်သောရုပ်ပုံများထက်ကျော်လွန်သော) အရာအားလုံးမှထွက်ပေါ်လာရန်ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံအပေါ်လုံးဝနီးပါးမှီခိုသည်။ Hidden Side သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကစားစွမ်းရည်များနှင့်အတူထုပ်ပိုးပြီးသားလျောက်ပတ်သောတည်ဆောက်ခဲ့ကြသောအရာကိုအလှဆင်ရန်၎င်း၏ app ကိုသာအသုံးပြုခဲ့သည်။
ကြိုက်နှစ်သက်နေစဉ် 43113 K-Pawp ဖျော်ဖြေပွဲ နှင့် 43115 အဆိုပါ Boombox ယခုအခါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာများအကြားကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူးရန်ကြိုးပမ်းနေပြီးဖြစ်သည် VIDIYO။ အဆိုပါ Lego Group ၏ပြောကြားချက်အရလက်ရှိကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကိုစတိုးဆိုင်များတွင်ရောင်းချနေဆဲဖြစ်လိမ့်မည် ၄၃၁၀၈ Bandmatesအောက်တိုဘာလမှာဖြန့်ချိဖို့စီစဉ်ထားပေမယ့် ၂၀၂၃ အထိအသစ်တစ်ခုခုကိုတွေ့ဖို့မမျှော်လင့်ပါနဲ့။
← LEGO သည် SDCC 2021 အတွက်ရုပ်ပြတီထွင်သူဖြစ်သည်
Lego အတွက်အကောင်းဆုံးကိုးကား 10 Ideas ၂၁၃၂၈ Seinfeld →